Qeybta 1: updates joogto ah ka hor 2014
Video Camera & xiriiriyaan
Miisaanka & Cabirka
OSX 10.7 Libaaxa iSight 480P, IR Reciever, Bluetooth 2.1 3 LB, 325mm X 227mm X 19mm (WXDXH)
OSX 10.9 Mavericks iSight 480P, garoonka diyaaradaha, Bluetooth 2.1 + EDR 2.3 LB, 300mm X 192mm X 17mm (WXDXH)
2.9 LB, 300mm X 192mm X 17mm (WXDXH)
iSight 480P, Dual-Band garoonka diyaaradaha, Bluetooth 4.0 2.3 LB, 300mm X 192mm X 17mm (WXDXH)
FaceTime 720p, Dual-Band garoonka diyaaradaha, Bluetooth 4.0 2.3 LB, 300mm X 192mm X 17mm (WXDXH)
OSX 10.6, 10.7, 10.8 iSight 480P, IR Reciever, Bluetooth 2.1
OSX 10.9 Mavericks FaceTime 720p, Dual-Band garoonka diyaaradaha, Bluetooth 4.0
OSX 10.9 Mavericks iSight 480P, IR Reciever, Bluetooth 2.1, garoonka diyaaradaha ba'an 4.50 LB, 325 mm 24mm X 227mm (WXDXH)
5.50 LB, 364 mm 24mm X 249mm (WXDXH)
6,60 LB, 393 mm 25 mm, X 267mm (WXDXH)
4.50 LB, 325 mm 24mm X 227mm (WXDXH)
5,60 LB, 364 mm 24mm X 249mm (WXDXH)
FaceTime 720p, garoonka diyaaradaha ba'an, Bluetooth 4.0 4.50 LB, 325 mm 24mm X 227mm (WXDXH)
3.57 LB, 314 mm 19mm X 219mm (WXDXH)
4.46m LB, 359 mm 18mm X 247mm (WXDXH)
Qeybta 2: Mac update wararka xanta ah ee 2014
Mac Wararka xanta ah
2014 u muuqataa in ay sanadka ah ee Brazuca iyo Minimalism. Hadda, ma waxaan u baahan tahay inaad sharaxdo sababta ay sannadda Brazuca laakiin Minimalism, Apple, sida xaqiiqada ah waa sababta. Daah-of wada haayay OSX Yosemite ee WWDC 2014 waa talaabo Apple ee dhinaca jidka midayntii Desktop Operating System ay Mobile iyo. Iskusoo wada duuboo, keeno labada rostrums ku dhow yahay content Boodaynin ee Apple ayaa baaldi-liiska uga faaidaysan.
2014 MacBook Air Shaxda warka belefta ah
Wakhti dheer ka hor, Apple siiyey ay bandhigay ugu wanaagsan ee Pro MacBook ah, Wonder No ay markeeda MacBook Air ayaa hadda si aan ku dhaxlo dhaxlay dhigma. Ee gudaha ee Apple ayaa sheegaya in halkaas ay noqon doontaa isbedel waaweyn ee sanadkan ee MacBook Air la 'No Walac isha Display', cabbir screen dib loo eegay, weyn iyo Processor hufan. Waa in la ogaadaa in MacBook Air waa qalab High-End kaliya ee line-soo-saarka Apple ee aan haysanin ah Display isha; warka belefta ah Balanqaadyo u MacBook Air xitaa la filan karaa Graphics Engine fiican oo xiiso leh OSX 10,10 Yosemite.
2014 iMac Shaxda warka belefta ah
WWDC 2014 uu ahaa uun bilowga ah ee Ansixinta darroor quruxsan culus. System Daahfurka Operating ayaa xaqiijiyay in iMacs nafis waxaa soo socda ku dhacaan iyo sidoo kale waxaa jira fortuity ah Entry Level iMac ee kor si ay u muujiyaan, waayadan dambe. Ka dib markii iPad Mini iyo iPhone 5C, tani waxay noqon doontaa Apple isku dayga saddexaad ka badan diiradda ku wajahan kor u qaadida qalabka jaban. Dhacooda ee qiimaha MacBook Air Oo Xaqiijiyay In ka iMacs dhamaadka hoose. OS cusub diyaar u noqon doono ku daydo jir ah oo cusub oo isku mar la god ee OSX 10.9 Mavericks
2014 MacBook Shaxda warka belefta ah Pro
Inta aynu ka filan wax badan u MAcBook Air iyo iMacs iyo xitaa Mac Minis, Waxaan rajaynaynaa oo keliya ma isbedel design suuragal ah in isha MacBook Pro. Tan waxaa laga yaabaa sano ee la baabiiyo daydo Non-isha oo ku soo kici lagu daydo oo leh qalabka wax yar ka fiican oo OSX ku hagaajiyo sare ee wax walba. Inkastoo, Apple shaaca isha MacBook daydo cusub Pro leh tirooyin cusub Model iyo faaidaysan qaarkood horaantii sanadkan, shaki ah oo soo noq ee taariikhda la filayaa by furayaa.
Talooyin Top aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan shabakadaha u cusboonaysiinta ee Mac iyo Windows
Mactubes aan shaqaynayn? Mushkiladii loo xaliyo
MKV2VOB Mac: Sida loo Beddelaan MKV in VOB u PS3 on Mac
> Resource > Mac > Mac update wararka xanta ah ee 2014